सांसद मिखाइल Degtyarev: जीवनी, फोटो
मिखाइल Degtyarev एक प्रमुख रूसी राजनीतिज्ञ छ, ठूलो आदर कमाएका र उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी बाट राज्य Duma एक उप भयो। यो मान्छे - एक बरु बहु-faceted व्यक्तित्व र उहाँले आफ्ना जवान उमेर बावजुद ठूलो हाइट्स पुगेको छ।
मिखाइल Degtyarev गर्ने हो? आफ्नो जीवनी 1981 मा यसको मूल को छ। उहाँले, नोवोसिबिर्स्क क्षेत्र को सानो टाउन Kuibyshev भनिन्छ मा जन्म भएको थियो। आफ्नो आमा र बुबा चिकित्सा आफ्नो जीवन समर्पण। पिताजी एक अभ्यास सर्जन र एक obstetrician-स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रसब मा पचास भन्दा बढी हजार महिला यसको इतिहास मा लिए जो थियो। र मेरो आमा - उच्चतम श्रेणी को एक डाक्टर। आमाबाबुले अक्सर उहाँले अत्यन्तै प्रेम आफ्नो हजुरबुबा, संग बस्ने लामो समय काम को लागि बाँकी छन्, त्यसैले केटा।
शिक्षा मिखाइल Degtyarev
आफ्नो शिक्षा मिखाइल Degtyarev धेरै ध्यान। उहाँले धेरै हासिल गरेको छ किन सायद छ। मा 17, उहाँले समारा उच्च विद्यालय को अन्तर्राष्ट्रिय शहर देखि, खैर, सम्मान संग स्नातक। त्यसै वर्ष उनले आफ्नो गृहनगर मा राज्य एयरोस्पेस विश्वविद्यालय प्रवेश। 2004 मा उहाँले एउटा इन्जिनियर रूपमा एक डिग्री प्राप्त, र 2005 मा पहिले देखि नै एक प्रबन्धक भएको छ। 8 वर्षपछि फेरि विश्व Civilizations को मास्को संस्थान प्रविष्ट गर्नुभयो। यो विश्वविद्यालय मा, त्यो एक वकील हुन छैन सिके। यसलाई उल्लेख पर्छ भनेर Degtyarev - धेरै बहु-faceted व्यक्तित्व, रूपमा प्रारम्भिक 34 जस्तै, उहाँले एक एकदम प्रमुख चुचुराहरूको पुग्यो किन छ।
जीवन र घटनाहरू
जो मिखाइल Degtyarev (LDPR) पुग्यो? जीवनी उप विभिन्न घटनाहरू भरिएको। दुई thousandth वर्ष को शुरुवात देखि माइकल सक्रिय व्यक्ति भएको र भाग विभिन्न युवा आन्दोलनहरु मा छ। उहाँ सधैं आफ्नो कार्यहरू गरेर भीड र विकास, संगठनात्मक कौशल, समर्पण पछि लाग्नुलाई देखि बाहिर उभिए। र यो भयो त, उहाँले आफ्नो लक्ष्य पछ्याउने गर्न थाले। पहिले नै 2001 मा उहाँले सबैभन्दा लोकप्रिय युवा आन्दोलनहरु समारा एक को अध्यक्ष को पोस्ट प्रस्ताव थियो। उहाँले बीस भन्दा अधिक थियो, र उहाँले धेरै मात्र को सपना गर्न सक्छन् जो को हाइट्स पुगेको छ। दुई वर्ष पछि, Degtyarev नाम "संयुक्त रूस" अन्तर्गत सबैभन्दा होनहार दल एक सामेल गर्न सक्षम थियो।
"युवा एकता" - यो पार्टी जवान मान्छे को आन्दोलन। र माइकल लगभग दुई वर्ष एक नेता यहाँ बिताए। उहाँले थियो ती वर्ष मा, त्यो आफ्नो कर्मचारीहरु को एक थियो जहाँ समारा Duma, एक संसद पनि छ। र 2004 वसन्त मा, त्यो उप अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। एक जवान मानिसको पेसा यसको लागि उहाँले र चाहन्थे किनभने, उहाँले धेरै खुशी थियो भनेर, तेजी विकास गरे। त्यसै वर्ष मा मिखाइल Degtyarev पहिले नै समारा शहर को शहर परिषद को एक उप हुन्छन्। यो एक धेरै गाह्रो-काम र बौद्धिक मान्छे हो। आफ्नो पछि वर्ष बीस-पाँच भन्दा बढी प्राविधिक र आर्थिक प्रकाशनहरू लेखे उहाँले थियो। माइकल अंग्रेजी पोख्त छ।
2005 देखि, क्यारियर Degtyareva पनि thrived। उहाँले धेरै भाग्यमानी थियो। जे Kogan, नयाँ संयोजक को समयमा खोजे र Degtyareva तुरुन्तै उसलाई यो ठाउँमा जान एउटा प्रस्ताव गरेको व्यक्ति बारेमा पर्याप्त सुनेका। हिउँदमा, माइकल को उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी सदस्य भएको छ। र उसलाई पनि luckier थियो पछि Zhirinovsky उहाँलाई आफ्नो सहायक गरे रूपमा। अप्रिल 2006 मा, Degtyarev अन्तमा एक संयोजक भयो। शरद ऋतु 2006 मा, माइकल स्वास्थ्य को कुर्सी रूपमा सेवा पनि संस्कृति र खेल समिति को एक भाग थियो। छ महिना भित्र Degtyarev समारा शहर देखि उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी को सदस्य भए। मेहनत को दुई वर्ष पछि, माइकल फेरि बाँध्न मार्फत rises र VV को कर्मियों आरक्षित एक सदस्य हो पुटिन। 2013 मा उहाँले तीन प्रतिशत गोल जो रूसी राजधानी को मेयर, को चुनाव मा भाग लिए। उहाँले उड्डयन को संस्थान देखि स्नातक देखि, 2013 मा राष्ट्रपति उड्डयन संग गर्नुहुन्छ जो एक विशेष राज्य समिति, उसलाई नियुक्त। मिखाइल Degtyarev अब त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति, पनि स्विट्जरल्याण्ड र क्यानाडा प्रतिबंध को सूची मा ल्याए छन्।
मिखाइल Degtyarev समारा मा Galina आफ्नो भविष्य पत्नी भेटे। उहाँले केटी संग प्रेम मा तुरुन्तै गिर र आफ्नो प्रिय को हृदय जीत कार्यहरू धेरै गरे। चाँडै मान्नेहरूले विवाह गरेका थिए। व्यापार गर्न - 2011 मा, तिनीहरूले अन्तमा मिखाइल राज्य Duma काम गर्न सक्षम थियो जहाँ मास्को, र आफ्नो पत्नी सारियो। अब जवान दम्पतीले तीन छोराछोरी हुर्काउन - छोराहरू।
पुरस्कार र प्रमाणपत्र
मिखाइल Degtyarev - जो आफ्नो 34 वर्ष उहाँले विभिन्न पुरस्कार प्राप्त जसको लागि देश को लागि धेरै गरेको छ उप। रक्षा मंत्रालय को क्रिमीआ को बदलामा नीति सहायताको लागि एक पदक पुरस्कृत गरियो। भ्लादिमिर पुटिन पनि Degtyareva व्यक्ति disregarded र लगनशील सार्वजनिक सेवाको लागि उहाँलाई एक पदक दिनुभयो छैन। पनि माइकल नागरिकहरु को वैध अधिकार वृद्धि ताकि, आफ्नो सेवाहरू लागि राष्ट्रपति देखि एक पत्र प्राप्त भयो।
पहल र नवाचारै
मिखाइल Degtyarev - एक होनहार सांसद, सँगै अन्य नीतिहरू, हाम्रो देश अझै पनि खडा गर्दैन नवाचारै धन्यवाद। आफ्नो पहल मा प्रसूति राजधानी, एक बच्चाको जन्म लागि दिइएको छ जो मा कानून द्वारा विकसित भएको थियो। Degtyarev पनि यसलाई छैन भुक्तानी गर्न आवश्यक जसको लागि वाइफाइ रूस को क्षेत्र, उच्च शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना मा व्यवस्था सिर्जना गर्ने, को युवा को हेरविचार गरे। यो नवीनता प्रेमीहरूको को छुट्टी पहिले केही दिन, 2013 को हिउँदमा शक्ति आयो। उहाँले साधारण रूसी नागरिक को बचत गर्न चासो को प्रकटीकरण हवाला, रूसी अमेरिकी मुद्रा मा निषेधाज्ञा को विषय उठायो। के भइ रहेको छ चिन्तित, मिखाइल Degtyarev युक्रेनमा सेना पठाउन प्रस्ताव, श्रम कामको लागि, रूस आए किनभने यी मानिसहरू सँगै रूस संग, हाम्रो देशमा जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ मात्र तरिका हो।
उप मिखाइल Degtyarev बारेमा निष्कर्षमा
भर्टेक्स डाटा आफ्नो काम र ज्ञान संग जो यस्तो मान्छे,, हाम्रो देशमा हुन र यसको विकास गर्न योगदान छ। मिखाइल Degtyarev, सायद, ती मान्छे को। देश को राम्रो को लागि काम गर्न इच्छुक छ जो यस बलियो-इरादों व्यक्ति। त्यसैले सार्ने कि उमेर मा सबैलाई छैन, यो उनीहरूको प्रयासमा छ। यो एक जवान बौद्धिक र अगाडि-देख उप पनि सबैभन्दा Zhirinovsky को ठाउँ लिन सक्षम छ जो छ। आफ्नो इमानदारिता र निष्कपटता नजरमा पनि तिनीहरूलाई देखिने गर्न, लेख मा प्रस्तुत फोटो - तपाईं यसलाई मिखाइल Degtyarev कस्तो देखिन्छ देख्न सक्छौं।
पश्चिम बैंक: को द्वन्द्व को इतिहास र यसको शान्तिपूर्ण संकल्प को समस्या
Yevgeny Savchenko: को बेल्गोरड क्षेत्र को राज्यपाल
तातियाना Yumashev: फोटो, जीवनी। बच्चाहरु Yumasheva Tatyana Borisovna
तपाईं अझै पनि के मेदभेदेभ र पुटिन गरेको वृद्धि रुचि राख्नुहुन्छ?
Nikolai Ryzhkov: जीवनी र फोटो
पहाड पाइन (Mugo)। Mugo Mugus (बौना फारम): फोटो, रोपण र हेरविचार
पाइ "घोंघा": केही पाक व्यञ्जनहरु
फिल्म "को प्रेस्टिज": समीक्षा, अभिनेताहरु, फिल्म गरेको षड्यन्त्र
कविता अध्ययनहरू। रूसी कवि द्वारा कविता
सोया सस: लाभ वा हानि
आफ्नो हातको साथ हातबाट किचिन बनाउनुहोस् धेरै सजिलो छ!
सम्भव कारण: किन मासिक थक्के छन्
मैले मेरो कम्प्युटरलाई पुन: सुरूवात गरें? धेरै तरिकाको विवरण
प्रार्य गठन यार्न - गुणस्तर र उपलब्धता
बिटा-carotene - यो के हो? खाद्य पदार्थ मा बिटा-carotene
पुस्तकको समीक्षा "मास्टर र Margarita" (मिखाइल Bulgakov)